Maxaa ka soo baxay kulamada Ra’isul Wasaare Rooble uu la qaatay Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi? | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Maxaa ka soo baxay kulamada Ra’isul Wasaare Rooble uu la qaatay Mahdi...
Maxaa ka soo baxay kulamada Ra’isul Wasaare Rooble uu la qaatay Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi?
Ra’isul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble deg deg ugu soo laabtay Muqdisho ayaa durba bilaabay dadaalo xal loogu raadinayo khilaafkan soo banaan baxay si aysan shaqada guddiga doorashada saameyn ugu yeelan.
waxaa warar baxay sheegayaan khilaaf xoogan oo u dhaxeeya guddiga doorashada gobolada Waqooyi ee Somaliland, kadib markii guddigaasi labo garab u kala jabeen ayna siyaabo kala duwan u kala doorteen guddon.
Khilaafkan ayaa durba saameyn xoogan ku yeeshay howlaha shaqo ee guddiga doorashada, waxaana labadan garab ee u kala jabeen guddiga doorashada gobolada Waqooyi kala hogaaminaya Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
Rooble ayaa la kulmay Ra’isul Wasaare kuxigeenka Soomaaliya Mahadi Guuleed waxa uuna kala hadlay khilaafkan ka dhax taagan guddiga doorashada Somaliland iyo sida xal looga gaari karo.
Dhanka kale Ra’isul Wasaare Rooble ayaa sidoo kale xiriir la sameeyay Gudoomiyaha Aqalka sare ee Baarlamaanka federaalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi, waxa uuna isna kala hadlay khilaafkan cusub iyo caqabadaha ka dhalan kara.
Gudoonka Guddiga doorashada heer federaal ayaa sidoo kale wada dadaalo xal looga gaarayo khilaafka ka dhax jira guddiga doorashada gobolada Waqooyi ee Somaliland iyo sidii loo dhisi lahaa guddon raali la isaga yahay ee yeeshaan guddigaasi.
Waxaa jirta in Guddiga doorashada gobolada iney soo kala magacaabeen Ra’isul Wasaare kuxigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed iyo Gudoomiyaha Aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi, labada garab ayaana aragti ahaan ada u kala fog.
Previous articleGareth Southgate Oo Go’aan Ka Gaadhay Mustaqbalkiisa England Kadib Markii Laga Qaaday Euro 2020. – banaadirsom
Next articleJose Mourinho Oo Ku Digtay Xiddigaha Xulka England U Ciyaara Kadib Markii Saddexda Libaax Lagu Garaacay Euro 2020. – banaadirsom